ढाडको दुखाइ र पीडा कम गर्ने उपाए - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
म २१ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । हाल मेरो गर्भमा ४ महिनाको शिशु छ । आजभोलि मेरो ढाड दुख्न थालेको छ । यो नराम्रो त होइन नि ? यस्तो अवस्थामा पीडा कम गर्न औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ?
सामान्यत: गर्भ रहेको दोस्रो तीन महिना सुरक्षित एवं राम्रो अवस्था हो । यो अवस्थामा खानामा पनि रुचि बढ्छ । कसै–कसैलाई भने ढाड दुख्ने समस्याले पिरोल्न सक्छ । पाठेघर ठूलो भएर ढाडको मांसपेशी तन्किएका कारण यस्तो भएको हो ।
यस्तो अवस्थामा पीडा कम गर्ने औषधि सेवन गर्नु राम्रो होइन, बरु ढाड दुख्ने अन्य कारणहरू खोज्नुपर्छ ।